Ihe ntanetị 1GB n'oge oriri oriri Ramadan Site na Turkcell, Vodafone na Türk Telekom | RayHaber | raillynews
HomeGeneralIhe ntanetị 1GB n'oge oriri oriri Ramadan Site na Turkcell, Vodafone na Türk Telekom
Mgbasa ozi ịntanetị gbatụrụ ụgbụ n'oge nnọkọ turkcell vodafone na turk telekom ramazan
Turkcell, Türk Telekom na Vodafone na-enye 1 GB Eid al-Fitr onyinye. Site na ọdịnaya a kwadebere nke ọma maka ụmụ amaala anyị na-achọgharị na ịntanetị maka mkpọsa ịntanetị na-akwụghị ụgwọ, a na-enye ịntanetị n'efu ka ọ hà ka oge niile nọrọ n'ụlọ. N’ụbọchị ndị a dị mkpa n’oghere usoro nje virus na-adị n’otu corona, Turkcell, Türk Telekom na Vodafone weputara mgbasa ozi ịntanetị na-akwụghị ụgwọ.
1 GB nke ozi ịntanetị n'efu na-agbasa ngwa ngwa. Türkcell abịawo maka ndị ahịa Türk Telekom na Vodafone. Onye Minista Transportgbọ njem na akụrụngwa Adil Karaismailoğlu na ndị ọrụ GMS nwere nnọkọ vidiyo pụrụ iche. N'ihi ogbako vidio a, ka ha na-ekwu okwu banyere Pandemi, a gboro mkpa ịntanetị nke ụmụ amaala. N'okwu ahụ, ekwuru na ekwesịrị ịnye 1 ịntanetị ntanetị n'enweghi ịkpa oke ọ bụla nye ndị ahịa Türkcell, Türk Telekom na Vodafone. Kwuwapụtara na a ga-enye 1 GB nke nkwado data n'efu. N'imesi ike na ọnụọgụ ndị debanyere aha na ekwentị ruru nde 2020 mgbe ọ na-erule 81, Minista nke Transportgbọ njem Karaismailoğlu kwuru, “Anyị ahụla ụdị usoro nje Corona ọhụrụ (Covid-19) ọhụụ; Site na itinye ego anyị na akụrụngwa nkwukọrịta na afọ 18 n'okpuru onye isi ala anyị. Mr. Recep Tayyip Erdoğan, mba anyị nwere otu ihe mgbochi kachasị mma n'ụwa. N'otu aka ahụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ihe ọ bụla site na agụmakwụkwọ na ndụ ọrụ agbabala gburugburu ebe obibi dijitalụ ma na-achọ ịnweta akụrụngwa amụbawo ọtụtụ ugboro, mana enweghị ọgba aghara na akụrụngwa anyị. "
Ihe ntanetị 1GB na oriri mmemme Ramadan
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ nke ndị ọrụ dịka Türkcell, Türk Telekom na Vodafone, ihe ị ga - eme bụ ịbanye na ngwa mkpanaka nke ndị ọrụ a ma ọ bụ na weebụsaịtị. Mgbe ịbanyechara, ị nwere ike ịkọwa ihe ntanetị 1 GB na ahịrị gị site na taabụ ịntanetị na-akwụghị ụgwọ. Mgbe usoro a gachara, you nwere ike iji ịntanetị 1GB gị n’oge ememme Ramadan.
Ndị na-edepụta Turkcell na oge Ịntanetị na Istanbul Metro
Ugbo ala Metro na-aga Türk Telekom Arena malitere
Ali Yen SK Metro Flights Türk Telekom Arena
Nkwupụta dị ukwuu na eriri TCDD na Türk Telekom
Mmekọrịta na Türk Telekom si BURULAŞ
Türk Telekom dị na nkà nke mmepụta nkà na ụzụ ụwa
Samsun Road Türk Telekom Junction Nke mbụ na-egwu egwu
A ga-ekesa Iftar na Metro na Ankaray Stations n'oge Ramadan na Ankara
Ụgbọ njem na Izmir Rụbaa 50 pasent n'oge Eid Al-Adha
Bus na Metro Free n'oge Ememme Àjà na Adana
Boztepe Cable Car Jupụtara Ememe Ramadan
Kadıköy-Ndị Metro nke na-ebelata ugo na nkeji iri abụọ na iteghete ka a ga-akpọlite ​​maka Oriri Ramadan
UgoKadıköy metro ga - eme njem ụgbọ elu nke mbụ na Ramadan
Ememe ụbọchị ezumike site na njem ụgbọ elu dị elu na ala, ikuku na oké osimiri
Bay Bridge na-akwadebe maka Eid al-Fitr
TCDD General Manager İsa ApaydınOzi nke Ramadan
Tinyekwuo ụgbọ elu ndị ọzọ na YHT tupu Eid Fitr
Ozi Minista nke Ụgbọ njem Ahmet Arslan Ramadan Ememe
Turkey ga-anọ Eid ememe na okporo ụzọ